Taorian’ny Nanadihadiany Ny Farihy Misy Poizina Nisy Nanafika Tany Rosia Ny Mpitoraka Bilaogy Iray Momba ny Tontolo Iainana · Global Voices teny Malagasy
Taorian'ny Nanadihadiany Ny Farihy Misy Poizina Nisy Nanafika Tany Rosia Ny Mpitoraka Bilaogy Iray Momba ny Tontolo Iainana
Voadika ny 16 Jona 2013 1:05 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, Deutsch, polski, English
Lasa sehatra mampidi-doza ho an'ny fahafanam-pon'ny vahoaka ao Rosia ny fiarovana ny tontolo iainana—farafaharatsiny rehefa voakasika ny fandotoana ataon'ny indostria. Izany dia satria matetika mifanohitra mivantana amin'ireo tombotsoan'ny fandraharahana isam-paritra, izay matetika mihetsika amin-kerisetra, ireo mafàna fo mpiaro ny tontolo iainana. Ohatra mivaingana iray: ny 9 Mey 2013, nisy olona tsy fantatra nanafika ary nidaroka mafy ny mpitoraka bilaogy iray mikasika ny tontolo iainana avy any amin'ilay vohitra indostrialy salantsalany any Pervouralsk (40 km miala an'i Yekaterinburg, any amin'ireo tendrombohitra Ural). Ilay mpitoraka bilaogy, Stepan Chernogubov, dia milaza fa ho valifaty tamin'ilay fanentanana nataony mikasika ilay mpamokatra krôma ao an-toerana izay manary fako ao amin'ny Ony maninto-maso Chusovaya (jereo ny sary tahiry eto ambany) io fanafihana io.
Hantsambato any amin'ilay Ony Chusovaya. Iray amin'ireo sary miloko nalain'i Prokudin-Gorsky tamin'ny 1912. Sehatra ho an'ny daholobe. Wikimedia Commons.
Ny 4 Mey 2013, nahazo vaovao mikasika fanariana fako tsy ara-dalàna mahatonga ilay ony mivadika ho “mena tahaka ny rà” i Chernogubov, ary nandeha nanamarina izany sy naka sary. Fantsona manary fotaka simika mankany aminà farihy eo akaiky eo no hitany tamin'izany, izay nihoatra ka nankany amin'ilay ony. Nanoritsoritra [ru] ny zava-nitranga i Chernogubov tao amin'ny bilaoginy ao amin'ny LiveJournal:
Naheno fofona simika mahery aho, izay tsapako nankarary ny oroko sy ny tendako. […] Ny loharano nameno akora simika io farihy io, raha ny fahitana azy, dia fantsona arafesina. Angamba mety nipoaka izany nandritra ny fialan-tsasatra, nefa tahaka ny efa toy izao foana hatrany ilay izy.
Akora simika lokom-boasary mandeha mankany aminà farihy eo akaikin'i Chusovaya avy aminà fantsona vaky. Sary avy ao amin'ny bilaogin'i Chernogubov.
Naverina navoakan'ilay [ru] ekonomista ao an-toerana, Alexander Anikin tao amin'ny bilaogy Echo Moskvy, ny lahatsoratr'i Chernogubov. Tsy nanao ho toy ny tsinontsinona izany fanentanana izany ilay orinasa mpamokatra voakasika, dia ny “Russian Chrome 1915 [ru]”. Rehefa niverina tany amin'ny toeran'ilay fanariana fako i Chernogubov ny ampitson'iny (narahinà vondron'olona mpiaro ny tontolo iainana avy ao Yekaterinburg) mba haka santionany amin'ilay akora simika, notsenain'ireo mpiambina voatokana izy ireo izay niezaka ny hanakana azy ireo tsy hikitika ilay rano [ru]:
Fifanandrinana teo amin'ireo mpiaro ny tontolo iainana izay naka santionany tamin'ilay rano sy ireo mpiambina. Sary ao amin'ny YouTube, 23 Mey 2013.
Tahaka ny efa nahiahianay, namorona sakana amin'ny fakàna sombin'ilay rano izy ireo. […] Taty aoriana, taorian'ny niezahan'izy ireo nampiasa herim-batana hanerena anay tsy haka ireo santionany ireo, nihemotra ihany ireo olona ireo (izay nilaza fa mpiambina avy ao amin'ilay orinasa mpamokatra Krôma “Russian Chrome 1915″) rehefa nandrahona azy ireo aho ny handraraka ilay santionany amin'ny tànany, tarehiny, ary ny vatany.
Avy eo, nitàna an'i Chernogubov sy ny manodidina azy ny mpitandro filaminana tao an-toerana taorian'ny nitorohan'ny lehiben'ilay ekipa mpiambina voatokana azy ireo ho “nangalatra” ireo santionanà rano ireo, nefa tsy ela akory dia navotsotry ny manampahefana ny rehetra. Tanatin'io lahatsoratra [ru] io ihany, nilaza i Chernogubov fa nantsoinà tonian-dahatsoratry ny gazety iray tao an-toerana ny iray amin'ireo tanora mpiaro ny tontolo iainana niaraka taminy, izay nangataka azy tsy hampiakatra ilay raharaha mikasika ny fandotoan'ny “Russian Chrome”, satria hahavoa ny Ben'ny tanànan'i Pervouralsk izany, izay raha ny hita dia misy fifandraisana amin'io ozinina io. Ity ny fanoritsoritan'ilay [ru] ozinina io ny zava-nitranga ny 5 Mey:
[…] nisy olona tsy fantatra dimy, niezaka hiditra tao amin'ny toerana nisy ilay toby fandiovana ny rano maloton'ny “Russian Chrome 1915.” Nitondra tavoahangy feno rano tsy fantatra niaraka taminy izy ireo.
Tsy nifarana teo anefa ny olan'i Chernogubov. Ny 9 Mey, andro vitsy monja taorian'ny nampisy resabe momba azy sy nitaterany ilay trangam-pandotoana tamin'ireo polisy ao an-toerana[ru], nahamarika i Chernogubov sy ny vadiny rehefa nandehandeha fa nisy lehilahy farafahakeliny efatra nanara-maso azy. (Nahagaga fa fantany ny endriky ny iray tamin'ireo olona ireo izay mpandraharaha avy amin'ny sehatry ny “City Without Drugs” ao an-toerana, vondron'i Evgeniy Roizman miady amin'ny rongony mipetraka ao Yekaterinburg). Nanatona ny iray tamin'ireo lehilahy ireo i Chernogubov, ary nanontany ny antony nahatonga azy ireo hanaraka azy. Mampihoron-koditra [ru] ny zava-nitranga taorian'izay:
Ho setriny, notifiriny ny totohondry aho, avy eo nisy roa hafa nihazakazaka ary namolaka ny tànako tany an-damosiko. Tamin'izany fotoana izany, nanomboka namely mivantana ny lohako ilay voalohany […]. Rehefa vitako ny niala ny gejan'izy ireo sy nidaroka azy, nanery ahy hidaboka amin'ny tany ireo roa nihazona ahy ary nanomboka nidaroka ahy. […] Rehefa niezaka hitsangana indray aho, naka basy ny iray amin'ireo mpanafika ary nikapoka ny lohako tamin'ny vodibasy. Torana nandritra ny fotoana fohy aho . […] Vokany, vaky ny lohako, miaraka aminà zaitra roa, ary tapaka ny andrianifiko ambony.
Chernogubov tany amin'ny toeram-pitsaboana, taorian'ilay fanafihana. Sary avy ao amin'ny Y ouTube. 23 Mey 2013.
Rehefa tonga ny mpitandro filaminana taorian'ny naharesany ilay ady, namoaka karatra maha-mpitandro filaminana azy ny iray tamin'ireo mpanafika, hoy i Chernogubov, ary dia tsy nisy voatana ireo telo lahy. Azon'i Chernogubov antoka fa valifatin'ny fitorohany ny “Russian Chrome” ilay fanafihana. Kanefa raha izany, efa tafatsoaka ivelan'ny harona ny saka. Ny 10 Mey, nanangona ny santionany hafa avy amin'ilay ony ireo mafàna fon'ny Greenpeace ao Rosia, ary nahita [ru] fa 100 avo heny noho ny “harihitra avo indrindra azo ekena” amin'ilay krôma no misy ao anatin'ilay rano . Mazava ho azy, tsy manome antoka ny amin'ny mety hahitam-bokatra raha io zavatra io. Tsy voalohany izao no nanononan'ireo manampahefana ny anaran'ny “Russian Chrome” amin'ny resaka fandotoana ny tontolo iainana [ru], nefa mbola manohy mandraharaha sy mandoto ihany izy ary tsy misy afaka manasazy. Angamba hanisy fahasamihafany eo amin'ny fihantsiana ny vahoaka ho tezitra ny fanafihana an'i Chernogubov, ary angamba hisy olona ho voasazy ho setrin'izany. Na amin'ity vinavina tsara indrindra momba izay mety hitranga ity aza anefa, dia sarotra ny hijery ny tantaran'i Chernogubov ho zavatra hafa ankoatra ny fandresena tsy misy tohiny ho an'ireo Rosiana mpitoraka bilaogy sy mafana fo.